के सरकारले भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज गरेको हो?
सरकारले केही गरी अहिलेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरे पनि ऐन बमोजिम भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न अर्को आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्नैपर्ने कानूनी बाध्यता छ।
विषालु रक्सी पिउँदा चार मजदूरको मृत्यु, दुई बिरामी
विषालु रक्सी पिउँदा बाग्‍लुङमा चार जना मजदूरको मृत्यु भएको छ भने दुई जना गम्भीर बिरामी भएका छन्।
१४ असारबाट सम्पर्कविहीन भएकी पूर्वी नवलपरासीकी युवती अझै सम्पर्कमा आएकी छैनन्।
कानून संशोधन नभएसम्म संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रसँग सहकार्य नगर्ने मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको घोषणा द्वन्द्वपीडित संगठन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले कानून संशोधन नगरेसम्म संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरूसँग सहकार्य नगर्ने घोषणा गरेका छन्।
किन गलत छ दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाका आमालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्ने निर्णय? सानो उमेरका बच्चा भएका आमाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको श्रीलंकाको अनुभवले पनि यो प्रभावकारी छैन भन्ने देखाउँछ।
जनगणना अझै अनिश्चित, नतीजाका लागि अर्को वर्षसम्म कुर्नुपर्ने कोभिड-१९ संक्रमणले गर्दा स्थगित राष्ट्रिय जनगणना शुरू गरिने मिति अझै टुंगो लागेको छैन। लम्बिएको महामारी र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण जनगणनाको मिति अनिश्चित बनेको हो।
पीडक हामी हौं, सुध्रिनुपर्ने त हामीले हो ! विभेद गर्ने मान्छे को हुन् भनेर सोची बुझी हेर्दा हामी सबैजना विभेद गर्ने मान्छेहरू हौं भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ। हाम्रो सिङ्गो समाज विभेदै–विभेदको आडमा ठडिएको छ। घर–घरमा थरीथरीका विभेद कायम छन्।
दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने मन्त्री श्रेष्ठ पदमा बसिरहन अयोग्य : साझा पार्टी जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिलाई छुटाउन गएका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पदमा बसिरहन अयोग्य भएको विवेकशील साझा पार्टीले जनाएको छ।
हुम्लाका रिन्जिन फुन्जोकले पाए ‘रोलेक्स कन्जर्भेशन अवार्ड’ वन्यजन्तु संरक्षणमा योगदान पुर्‍याए बापत हुम्लाका रिन्जिन फुन्जोक लामाले ‘रोलेक्स कन्जर्भेशन अवार्ड २०२१’ प्राप्त गरेका छन्।
हेलम्बुमा हराएका चार जना भेटिए, अझै तीन विदेशीसहित २० बेपत्ता (सूचीसहित) मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण हराएका २४ जनामध्ये चार जना सम्पर्कमा आएका छन्। अझै तीन विदेशी नागरिकसहित २० जना बेपत्ता रहेका छन्।
बाढीपहिरोबाट देशभर ११ को मृत्यु, २५ जना बेपत्ता केही दिनदेखि देशका विभिन्न जिल्लामा आएको बाढी, पहिरो र हावाहुरीका कारण ११ जनाको मृत्यु भएको छ।
‘भागेर ज्यान त जोगियो, अब बाँच्ने कसरी?’ मेलम्ची नदीमा आएको बाढीबाट जसोतसो ज्यान जोगाएका स्थानीय बासिन्दा अब कसरी दैनिकी चलाउने भन्ने चिन्तामा छन्। ज्यान जोगिएको खुशी बिर्सिसकेका उनीहरू घरखेत गुमाएको पीडाले रनभुल्ल परेका छन्।
वडाध्यक्षले जोगाए मेलम्चीका एक सय परिवार
समाज अमित मचामसी
मेलम्ची नदीमा बाढी आउन थालेको खबर पाएपछि स्थानीय सरकारका एक जना जनप्रतिनिधिले लिएको पहलकदमीले मेलम्ची बजार क्षेत्रका सयौं बासिन्दाको ज्यान जोगिएको छ।
महामारीमा उच्च जोखिममा अशक्त र बहुअपांगता भएका व्यक्ति
अरूको सहयोग चाहिने पूर्ण अशक्त, बौद्धिक अपांगता भएका तथा अटिजम भएका व्यक्तिहरू कोरोना संक्रमण महामारीको यो वेला उच्च जोखिममा छन्।
यातायात क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि राहत प्याकेज माग
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले यातायात क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेको छ।
छिमेकीबाट साथ होइन, दुर्व्यवहार भोग्दै कोरोना संक्रमित कैलालीमा कोरोना संक्रमित र मृतकका परिवारले आफन्त, छिमेकीबाट मद्दत होइन, दुर्व्यवहार र अपमान पाइरहेका छन्।
बाँदरमुढे घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग एड्भोकेसी फोरम र जवाफदेहिता निगरानी समितिले बाँदरमुढे घटनाकाे दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्।
११ पुसमा ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय दिवस सरकारले ११ पुसमा ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ।
फ्रान्सबाट १० अक्सिजन जेनेरेटर आउँदै अक्सिजन फर नेपालको पहलमा फ्रान्सबाट १० वटा अक्सिजन जेनेरेटर युनिट ल्याउने तयारी गरिएको छ।
देशका ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा, जनजीवन प्रभावित, कहाँ कहिलेसम्म? कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न भन्दै देशका बिभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। एक महीनादेखिको निषेधाज्ञाले जनजीवन प्रभावित भएको छ भने अझ कतिपय जिल्लामा जेठभरि नै निषेधाज्ञा थपिएको छ।
ज्येष्ठ नागरिक भत्ता मासिक रु.४ हजार, एक हजारले बढ्यो सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई बढाएर रु. ४ हजार पुर्‍याएको छ।
लमजुङमा २४ घण्टामा ८६ पटक भूकम्पको धक्का गण्डकी प्रदेशको पहाडी जिल्ला लमजुङमा पछिल्लो २४ घण्टामा सानाठूला गरी ८६ पटक भूकम्पको धक्का महसूस गरिएको छ।